PL ချန်ပီယံဖြစ်ထားပေမယ့် ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ဦးကို ခေါ်ယူရာမှာ လီဗာပူးတို့ ယှဉ်နိုင်ဖွယ် မရှိတဲ့ အသင်း ၂ သင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂျွန်ဘန်း - SPORTS MYANMAR
June 29, 2020 - by Editor
လီဗာပူး ဂန္တဝင် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂျွန်ဘန်းက သူ့အသင်းဟောင်းဟာ အကောင်းဆုံး ဘောလုံးရာသီကို ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ပေမယ့်လည်း ကစားသမား တွေဟာ မန်ချက်စတာစီးတီးကို ကျော်ကာ လီဗာပူးကို ရွေးချယ်ချင်မှ ရွေးချယ် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့က မန်စီးတီး တို့ ချဲလ်ဆီးကို ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့တာကြောင့် လက်ကျန် ရ ပွဲ အလိုမှာပဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ၊ စူပါဖလား ၊ ကလပ် ကမ္ဘာ့ဖလား တို့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ကိုလည်း ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အအောင်မြင်ဆုံး ကာလတစ်ခုကို ဖြတ်သန်း နေပြီး ထိပ်တန်း ကစားသမား တွေကို ကောင်းကောင်း ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ အသင်း ဖြစ်နေ ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့ဟာ လာမည့် ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ကာကွယ် သွားရမယ့် အပြင် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကိုလည်း ပြန်လည် ရရှိဖို့ ပစ်မှတ် ထားနေတာကြောင့် နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်မှာ ကစားသမား ၁ ဦး ၂ ဦးကို အားဖြည့် သွားဖို့ ရှိနေ ပါတယ်။ နာပိုလီ နောက်ခံလူ ကူလီဘာလီ ကို လီဗာပူး နဲ့ စီးတီး တို့က အပြိုင် ခေါ်ယူ သွားမယ်လို့ သတင်းကြီး နေပြီး ဘန်းကတော့ ငွေကြေးဟာ ဘယ်အပြောင်းအရွေ့မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိက အခန်းကဏ္ဍ ကနေ ပါ၀င် နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
ဘန်းက “အကယ်၍ မန်ချက်စတာစီးတီး ကသာ ကူလီဘာလီ ကို လီဗာပူးတို့ ပေးချေ သွားမယ့် လစာရဲ့ ၂ ဆနဲ့ ကမ်းလှမ်း သွားခဲ့မယ် ဆိုရင် သူဟာ မန်ချက်စတာစီးတီး ကိုပဲ ပြောင်းရွေ့ သွားမှာပါ။ လီဗာပူးတို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်သွား တာနဲ့တင် ကူလီဘာလီ ဟာ လီဗာပူး ကိုပဲ ပြောင်းရွေ့မယ်လို့ တစ်ထစ်ချ ပြောသွားလို့ မရပါဘူး။
လီဗာပူးဟာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အနေအထားကို ပို်င်ဆိုင် ထားပါတယ်။ အခြား အသင်းတွေ လိုပဲ ကစားသမား တွေကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဘာစီလိုနာ ဒါမှမဟုတ် မန်ချက်စတာစီးတီး တို့ထက် ပိုမို ဆွဲဆောင်မှု ရှိသလား ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် ဘက်က ဒီလို မထင်မိ ပါဘူး။ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရာ ကတော့ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ကစားဟန်ဟာ လီဗာပူး နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ သူဟာ မန်စီးတီးရဲ့ ကစားဟန် နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လူတစ်ချို့ ကတော့ လီဗာပူးဟာ လက်ရှိ လူအင်အားနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို အပြတ်အသတ် လွှမ်းမိုးကာ ဗိုလ်စွဲ ထားခဲ့တဲ့ အသင်း ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ထပ် ကစားသမား ခေါ်ယူဖို့ ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ ဆိုပြီး မေးခွန်း ထုတ်နေကြ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘန်းက လီဗာပူးတို့ ဆက်လက် ထက်မြက် နေအောင် လုပ်သွားဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုလိုက်ပြီး အသင်းကို တိုးတက် စေနိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ ကစားသမားတွေ တွေ့တဲ့ အခါ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက်ထဲ ၀င်ကာ လှုပ်ရှား သွားရန် တိုက်တွန်း ခဲ့ပါတယ်။
ဘန်းက “လီဗာပူးဟာ အမြဲတမ်း အသင်းကို အင်အားတောင့်တင်းဖို့ အတွက် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေ နေမှာပါ။ အသင်းကြီး တစ်သင်း ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် ကစားသမား တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ဆိုတာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါ။ ကိုယ့်အသင်း ထိပ်ဆုံးကို ရောက်နေတဲ့ အခါ ကစားသမားတွေ ၀ယ်ယူဖို့ အတွက် အချိန်ကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ လာမည့် အပြောင်းအရွေ့မှာ လီဗာပူးကို ကစားသမားသစ်တွေ အများကြီး ရောက်လာမယ်လို့ မထင်မိ ပါဘူး။ အကယ်၍ ကစားသမား တစ်ဦးဟာ သူတို့ အသင်းကို တိုးတက်စေလိမ့်မယ်လို့ ခံစား မိပြီ ဆိုရင် သူတို့ ခေါ်ယူ သွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အခြား ကလပ်တွေနဲ့ ထူးမခြားနား ပါပဲ။” လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားသမားခေါ်ယူမှု တစ်ခုဟာ လီဗာပူးထက် ပိုကောင်းနေတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဂလင်းဂျွန်ဆင်
ဒေါ့မွန် ရဲ့ နံပါတ် ၇ ပိုင်ရှင်သစ် ၊ ဘန်ဝှိုက်ကို ကြေညာတော့မယ့် အာဆင်နယ် ၊ အိုလံပစ်ကနေ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ အာဂျင်တီးနား တို့နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ
EPL NEWS / NEWS
July 28, 2021 - by Editor
လီဗာပူး နောက်ခံလူဟောင်း ဂလင်းဂျွန်ဆင်က သူ့အနေနဲ့ အသင်းဟောင်းကို အေဗရာဟီမာ ကိုနာတေး ထက်စာရင် ရာဖေးဗာရန်းကို ဘာကြောင့် ခေါ်ယူစေချင်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ ဗာရန်းအတွက် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်းနဲ့ သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင့် မနေ့ညက အသင်းရဲ့ တရား၀င် ၀က်ဆိုက်ကနေ ကြေငြာသွားခဲ့ ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းများ အရ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ …
ဗာရန်း ကို ခေါ်ပြီးသွားတဲ့ ယူနိုက်တက် ၊ သူ့ရဲ့ တန်ကြေးများတယ်ဆိုတဲ့ ဟာလန်း ၊ တစ်ပွဲတည်း ၇ ဂိုးသွင်းတဲ့ တိုက်စစ်မှူး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစားသတင်းများ
Tokyo Olympic Stadium ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ဂျပန်ရောက် မြန်မာများ
သရဲနီ ဖြစ်တော့မယ့် ဗာရန်း ၊ ကိုယ့်လူကိုယ်ပြန်ချိုး တဲ့ ရွန်းနီ ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ့် လီဝန်ဒေါ့စကီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ